Python3 Lesson 1 - Khit Minnyo
Python-for-Hackers Python3 Lesson 1
Python3 Lesson 1
by KhitMinnyo on November 20, 2017 in Python-for-Hackers
ဒီနေ့မှာတော့ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ Python နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အတွင်းကျကျအချက်တွေကို လေ့လာရအောင်ပါ။ Python3ကို အဓိကထားအသုံးပြုမှာဖြစ်ပြီး Python နဲ့ပတ်သက်တဲ့ သိသင့်သိရာတွေကိုသာ ဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
* String တွေဟာဆိုရင် Python မှာ popular အဖြစ်ဆုံး ပုံစံ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အသုံးပြု ရေးသားမယ့် python3ရဲ့ idle3 မှာသာမက idle (Python 2) မှာပါ အစိမ်းရောင်နဲ့ ဖော်ပြပါတယ်။
*Quote (Single quote or Double quotes) ထဲမှာ ရေးရပါတယ်။
* Python မှာ String ရေးတဲ့အခါ Single quote ရော Double quotes ရောကို အတူတူပဲ သတ်မှတ်ပါတယ်။
* String မှာတော့ မည်သည့်စာမဆို ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အရေအတွက်လည်း ကန့်သတ်ထားခြင်း မရှိပါဘူး။
* Empty String ဆိုတာကတော့ '' (single quote ၂ချက်) ဖြစ်ပါတယ်။ အတွင်းမှာ မည်သည့်စာမျှ မပါပါဘူး။
* String ထဲမှာတော့ quote တွေဟာ ကိန်းလုံးတွေကိုတောင် စာသားတန်ဖိုးအဖြစ် ထည့်သွင်းသတ်မှတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သင်ဟာ ကိန်းဂဏန်းတွေကို အသုံးပြုတွက်ချက်ရမယ်ဆိုရင် String မှာ မထည့်ရပါဘူး။
* \_ သင်္ကေတကိုတော့ quote တွေကနေ လွန်မြောက်ဖို့ လိုအပ်ရင် သုံးပါတယ်။ ဒီအချက်ကို ရှင်းပြပါမယ်။ idle3 မှာ အောက်ပါအတိုင်း ရေးကြည့်ပါ။ ပြီးရင် Enter ။
print ("I don't have money.")
အထက်ပါ စာကြောင်းကို ကြည့်ရင် ရှင်းပါတယ်။ Double quote ကို အသုံးပြုထားတဲ့အတွက် စက်က Double quotes အတွင်းစာသားအားလုံးကို string အဖြစ် သတ်မှတ်သွားလို့ပါ။
print ('I don't have money.')
ဒီစာကြောင်းကိုကြည့်ပါ။ အပေါ်စာကြောင်းနဲ့ စာသားချင်း အားလုံး တူပေမယ့် quote မှာတော့ single quote ကိုသာ အသုံးပြုထားတာကြောင့် စက်က ဘယ်နေရာမှာဆုံးလဲမသိတဲ့အတွက် အနီးဆုံးဖြစ်တဲ့ 'I don' ထိပဲ သတ်မှတ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် error ကိုသာ သင်မြင်ရမှာပါ။ေ(ရှ့ပိုင်း second scheme မှာလည်း ရှင်းပြခဲ့ပြီးပါပြီ။) Double Quotes နဲ့ ရေးရင် ရပေမယ့် single quote ထဲမှာရော ရေးလို့ မရဘူးလား မေးစရာရှိလာပါတယ်။ အဖြေက ရပါတယ်။ ဒီလိုရေးကြည့်ရအောင်ပါ။
print ('I don\_'t have money.')
\_ ထည့်လိုက်တာကြောင့် အဲသည်နောက်က ' (quote) ကို စာသားထဲ ပါတယ်လို့ စက်က သတ်မှတ်လိုက်လို့ပါပဲ။
* \_n ကို နောက်တစ်ကြောင်း ဆင်းရန်အတွက် အသုံးပြုပါတယ်။ \_a ကတော့ ဖုန်းပုံစံပါ။
ဒါကြောင့်လည်း အနည်းငယ် အခက်အခဲ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အောက်ပါအတိုင်း idle3 မှာ ရိုက်ကြည့်လိုက်ပါ။
ဆိုပြီး ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ \_a ကို ဖုန်းပုံစံ သတ်မှတ်ပြီး \_n ကို enter (နောက်တစ်ကြောင်း) လို့ သတ်မှတ်လိုက်တာကြောင့်ပါ။
ဒါဆို ကျွန်တော်တို့က c\_app\_new ဆိုတဲ့စာကို ဒီအတိုင်းပဲ မဖြစ်မနေ ထုတ်ဖို့လိုလာတဲ့အခါမှာ ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။
လွယ်ပါတယ်။ ရှေ့မှာ r ထည့်ပေးလိုက်ရုံပါပဲ။ idle3 မှာ အောက်ပါအတိုင်းဆက်ရိုက်ကြည့်ပါဦး။
c\_app\_new ဆိုပြီး ကျွန်တော်တို့ လိုချင်တဲ့အတိုင်း ဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
Strings နဲ့ ပတ်သက်ပြီး နောက်ထပ် ပြန်နွှေးပေးချင်တာလေးတွေ ရှိပါသေးတယ်။
idle3 မှာပဲ file new မလုပ်ဘဲ တိုက်ရိုက် စမ်းကြည့်ရအောင်နော်။
>>> 'New ' + 'York'
>>> 4*' New' + 4*' York'
' New New New New York York York York'
>>> 3*'Um' + 'brella'
Second Scheme မှာလည်း သင်ခဲ့ပြီးသားမို့ အထွေအထူးတော့ ရှင်းမပြတော့ပါ။ String သည် သူ့ဆီ ဝင်လာသမျှကို စာသားတန်ဖိုးအဖြစ်သာ သတ်မှတ်ပါတယ်။
>>> '3' + '5'
string (အစိမ်းရောင်စာလုံး) နဲ့ ကိန်းတွေကို အပေါင်း အနုတ် ပြုလုပ်လို့ကတော့ အဖြေမှန်ကို လုံးဝ ရမှာမဟုတ်တာ သတိထားစေလိုပါတယ်။
String ကို superscripted လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ အညွှန်းကိန်း သုညနဲ့ စပြီး စာလုံးတွေကို ရေတွက်နိုင်တဲ့အကြောင်း index မှာ သင်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ တစ်ခါ ထပ်ပြောပါမယ်။
Python ဆိုတဲ့ စာလုံးထဲမှာ ရေကြည့်ရင် P=0, y=1, t=2, h=3. o=4, n=5 ဖြစ်ပါတယ်။
>>> x = 'I love Python'
ဆိုပြီး ထုတ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ space ခြားထားတာကိုပါ ထည့်ရေတယ်ဆိုတာ ပြောထားပြီးသားနော်။ x မှာလည်း အဖြေပါပါတယ်။
Triple quotes ဆိုတာကတော့ single (or) double quotes တွေကို သုံးကြိမ်ဆက်ရေးထားခြင်းကို ဆိုလိုပါတယ်။ တစ်ကြောင်းထက် ပိုတဲ့စာတွေကို ဖော်ပြချင်ရင် သုံးတာပါ။ ဥပမာပြောရရင်
idle3မှာ အောက်ပါအတိုင်းရိုက်ကြည့်ပါ။
>>> print ('''\_
I am going to teach Python. I love python.
Ch1. Python Introduction see page 5
Ch2. Python Strings see page 10
ကိုယ်ပေါ်စေချင်တဲ့စာကိုရေးပါ။ အဆုံးသတ်ကိုလည်း triple quotes နဲ့သာ အဆုံးသတ်ရပါမယ်
enter ဆက်ဆင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ အောက်ပါ အဖြေကို ရပါမယ်။
Lesson 1 ကို သေချာ ဖတ်ပြီးမှ ဆက်ဖတ်ရန်
*Python is an interpretd, object-oriented, high-level programming language with dynamic semantics.
*Python allows for Rapid Application Development.
*Python can be usedascripting or glue language to connect existing components together.
*Python is simple, easy to learn syntax emphasizes readability and code reuse.
Python အကြောင်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့ အများကြီးပြောရမှာပါ။ အလွယ်ဆုံးပြောရရင်တော့ high-level programming language တစ်ခုလို့ ဆိုရပါမယ်။ High-level programming language ဆိုတာက စက်ရော လူရော နားလည်လွယ်တဲ့ ကုဒ်တွေနဲ့ ရေးရခြင်းကို ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။ Python ရဲ့ အားသာချက်က application ဖန်တီးရတာ မြန်တယ်။ သင်ယူရတာ လွယ်တယ်။ ကုဒ်တွေကို အကြိမ်ကြိမ် ပြန်သုံးနိုင်တယ်။ စသည် စသည်ဖြင့် အားသာချက်တွေ အများကြီးနဲ့ လူသိများလာတဲ့ language ဖြစ်ပါတယ်။
Google ရဲ့ နာမည်ကျော် Google Search (ပြိုင်ဘက်မရှိ Search Engine)ကိုလည်း Python နဲ့ပဲ အဓိက ရေးခဲ့တာဖြစ်ပြီး Hacking Tools တွေကိုလည်း Python နဲ့ပဲ ဖန်တီးထားကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် Python ဟာ အလွန် အရေးပါတဲ့ Programming Language လို့ပြောရင် မမှားပါဘူး။
Input မပါဘဲ ရေးဆွဲနိုင်တဲ့ program ဆိုတာ မရှိသလောက်ပါပဲ။ Input ဟာ နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးနဲ့ လာပါတယ်။ ဥပမာပြောရရင် Database တွေဆီကဖြစ်စေ၊ အခြား ကွန်ပျူတာတွေကဖြစ်စေ၊ muse click လုပ်ပြီးဖြစ်စေ ဒါမှမဟုတ် အင်တာနက်မှဖြစ်စေ စသည်ဖြင့်ဖြစ်ပါတယ်။ Python မှာတော့ input() ဆိုတဲ့ function ကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ input အတွက်တော့ အောက်ပါ example လေးများကို ကျွန်တော်တို့ လေ့လာခဲ့ပြီးပါပြီ။
example ကို လေ့လာရန် idle3ကိုဖွင့်ပြီး file new လုပ်ပါ။ အောက်ပါကုဒ်လိုင်းလေးတွေ ရေးပြီး စမ်းကြည့်နိုင်ပါတယ်။
print ("Nice to meet you, " + name + "")
age = input ("How old are you, " + name + "?")
print ("So, you are already " + age + " years old," + name + ".")
Reading and Writing Files Syntax
* ပထမဆုံး argument ကတော့ ဖိုင်နာမည် ပါဝင်တဲ့ string ဖြစ်ပါတယ်။
* ဒုတိယ argument ကတော့ ကျွန်တော်တို့ အသုံးပြုမယ့် ပုံစံကို ဖော်ပြမယ့် နောက်ထပ် string တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
(ဒီတိုင်းရှင်းပြရတာက ရှုပ်ပါတယ်။ ဖိုင်ကို ဖတ်တဲ့ ရေးတဲ့ သင်ခန်းစာတွေကို ကျွန်တော်တို့ သင်ခဲ့ပြီးနော်)
ပြန်နွှေးချင်ရင် Desktop ပေါ်မှာ folder တစ်ခုဆောက်ပါ။ ပြီးရင် idle3 ကိုဖွင့် file new ယူ။ အောက်ပါ ကုဒ်လိုင်းလေးတွေ ရေးလိုက်ပါ။
file = open ("file.txt", "w")
file.write("Hello, I am Khit Minnyo. I'm studying python. I love it so much..")
ပြီးရင် ခုန folder အသစ်ထဲ save ပါ။ ပြီးရင် idle ကနေပဲ RUN ကြည့်လိုက်ပါ။ folder ထဲမှာ နောက်တစ်ဖိုင် ပေါ်လာပါမယ်။ ဒီသင်ခန်းစာကို လုပ်ပြီးသားမို့ အထွေအထူး ထပ်မပြောတော့ပါဘူး။ see picture
* Expression က ကိန်းဂဏန်းတွေ, string တွေ၊ ဒါမှမဟုတ် class တွေ စတဲ့ တစ်စုံတစ်ရာကို ကိုယ်စားပြု ဖော်ပြပေးပါတယ်။
* မည်သည့်တန်ဖိုးမဆို Expression ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ တစ်စုံတစ်ရာကို ပြုလုပ်ဖို့ statement ကိုလည်း Expression လို့ ခေါ်နိုင်ပါတယ်။
* Variables တွေ နဲ့ Function တွေကို Assignment ပြုလုပ်ပေးတာဟာလည်း Statement ဖြစ်ပါတယ်။
ဖော်ပြချက်တွေတိုင်းကို Expressions လို့ သတ်မှတ်လိုက သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကိုတော့ အကျယ်ချဲ့မနေတော့ပါဘူး။
howdy = "Hello" ဆိုတဲ့ variable သတ်မှတ်ချက်ကလေးကို ကြည့်ရအောင်။ howdy ကို Hello ဖြစ်အောင် သတ်မှတ်ပေးလိုက်တာက Expression ဖြစ်ပြီး အဲဒီ Expression က လုပ်ဆောင်သွားခြင်းကို statement လို့ သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။
hello ဆိုတာ ရိုးရှင်းတဲ့ ဖော်ပြချက် (Simple Expression) သာဖြစ်ပြီး သူ့မှာ operator ဘာမှ မပါဝင်သေးပါဘူး။ howdy ဆိုတာကိုလည်း Hello လို့သာ သတ်မှတ်လိုက်ရုံပဲ ရှိပါသေးတယ်။
e.g. >>> y = ("2" + "3")
Operator ဆိုတာကတော့ operation တွေ ဖြစ်လာဖို့အတွက် ပေါင်းစပ်ရတဲ့ အသေးဆုံးအစိတ်အပိုင်းဖြစ်တဲ့ operand တွေကို manipulate (Handle or Control) ဖို့အတွက် ဆောက်လုပ်ထားတဲ့အရာလို့ အကြမ်းဖျင်း သတ်မှတ်လို့ ရပေမယ့် English လိုပဲ မှတ်ထားတာက ပိုရှင်းပါတယ်။
ရှင်းသွားအောင် ဥပမာလေးနဲ့ ပြောပြမယ်။4+5ဆိုပါစို့။4နဲ့5ဟာ Operand လေးတွေဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့တွေ အလုပ်လုပ်ဖို့အတွက် ကြားခံ ပေါင်းစပ်ပေးတဲ့ + ကတော့ operator ပေါ့။
ဒါဆိုရင်တော့ သူ့ရဲ့ meaning ကို နားလည်မယ်ထင်ပါတယ်။
Basic Operator Types
****** Python Language မှာ support လုပ်တဲ့ အဓိက operators ပုံစံ ၃ခု ရှိပါတယ်။
2. Comparison (Relation) Operators
3. Assignment Operators ဆိုပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
ဆိုပြီး အများကြီး ရှိပါတယ်။ အဓိကကတော့ အပေါ်မှာ ဖော်ပြခဲ့တဲ့ ၃မျိုးပါ။ အသေးစိတ် ဖော်ပြထားကို ကြည့်ရန် Screen အပြည့် ဖွင့်ကြည့်ပါ။
- Subtraction Subtracts right hand operand froma–b= -10
* Multiplication Multiplies values on either side ofa*b= 200
/ Division Divides left hand operand by rightb/a= 2
% Modulus Divides left hand operand by rightb%a= 0
hand operand and returns remainder
** Exponent Performs exponential (power) calculation a**b =10 to the
on operators power 20
// Floor Division The division of operands where the result
is the quotient in which the digits after 9//2 =4and 9.0//2.0 = 4.0,
the decimal point are removed. But if one of the operands is negative, the result is floored, -11//3 = -4, -11.0//3 = -4.0
i.e., rounded away from zero (towards negative infinity):
!= If values of two operands are not equal, then condition becomes true.
> If the value of left operand is greater than the value of right operand,
then condition becomes true. (a > b) is not true.
< If the value of left operand is less than the value of right operand,
then condition becomes true. (a < b) is true.
>= If the value of left operand is greater than or equal to the value of right operand,
then condition becomes true. (a >= b) is not true.
<= If the value of left operand is less than or equal to the value of right operand,
then condition becomes true. (a <= b) is true.
+= Add AND It adds right operand to the left operand and assign the result
to left operand c +=ais equivalent to c = c + a
-= Subtract AND It subtracts right operand from the left operand and assign
the result to left operand c -=ais equivalent to c = c - a
*= Multiply AND It multiplies right operand with the left operand and assign
the result to left operand c *=ais equivalent to c = c * a
/= Divide AND It divides left operand with the right operand and
assign the result to left operand c /=ais equivalent to c = c / a
**= Exponent AND Performs exponential (power) calculation on operators and
assign value to the left operand c **=ais equivalent to c = c ** a
//= Floor Division It performs floor division on operators and assign value to the left operand c //=ais equivalent to c = c //
~ + - Complement, unary plus and minus (method names for the last two are +@ and -@)
& Bitwise 'AND'
^ | Bitwise exclusive `OR' and regular `OR'
သင်ပြီးသားတွေလည်းပါ။ ရေးထားတာတွေလည်း ရှင်းတာကြောင့် မြန်မာလို ပြန်မပြောပြတော့ဘူးနော်။ များလိုက်တဲ့ operators တွေပါလား ????????????
ဒါတွေ အလွတ် ရရမယ်လို့ မဆိုလိုပါဘူး။ ဘာက ဘာဆိုတာ သိဖို့တော့ လိုပါတယ်။ အဲသလိုပဲ လိုအပ်ရင် ပြန်ကြည့်ပြီး ရေးနိုင်ဖို့လည်း လိုပါတယ်။ ခေါင်းမူးနေလောက်ပြီမို့ ဒီနေ့တော့ ဒီလောက်ပါပဲ။ မနက်ဖြန်မှာ ဆက်ကြဦးစို့
သင်ခန်းစာ ၂ ကို ဖတ်ရန် ဒီစာကြောင်းကို နှိပ်ပါ
By KhitMinnyo on November 20, 2017
Si Thu Hein January 26, 2019 at 9:43 PM
So good sir!thank you so much for sharing your knowledges.....